American ikhompyutha unjiniyela Stiv Voznyak, kanye edume uSteve Imisebenzi ephethwe ukuvula umqondo wezwe amakhompyutha. Ngo-1975, babuthela kudivayisi yabo yokuqala, ukude efana PC yesimanje, futhi ngo-1980 waba abayizinjinga futhi izishayamthetho embonini computer. Stiv Voznyak, ogama biography uzobe achazwe kulo magazini, umsunguli ohlakaniphile futhi wabasunguli Apple multi-bhiliyoni inkampani enkulu dollar. Ngeshwa, it is kuyaqabukela kukhulunywa ngalo impumelelo yakhe emkhakheni electronics, ikakhulukazi zikhunjulwe uzakwabo - Steve Imisebenzi. Kodwa kwazi bani, kungaba ukuthi manje Imisebenzi kuyinto legend, uma hhayi Wozniak.
Ebuntwaneni kanye nogqozi lokuqala
UStefanu Buyela Umva Voznyak Wazalwa ngo-August 11, 1950 emzini San Jose entshonalanga ye-United States. Abazali bakhe abasuka eBukovina, unina bezizwe - isiJalimane, uyise - a Pole. E-US, bathuthela ngemva kweMpi Yezwe II. Ubaba Francis uStefanu Wozniak iziqu California Institute of Technology futhi ubulokhu missile isiqondiso uhlelo kule nkampani Lockheed, ukusebenza wobunjiniyela. Little Steve babesibona isandla sikayise wemba amadivayisi futhi wazama ukumsiza. Ngakho Stiv Voznyak wathola uthando kuqala futhi main - emhlabeni electronic. Khona-ke akazi ukuthi lapho into iba uyise inguquko ikhompyutha.
Okwamanje, amamaki umfundi wesine, umfana omncane kakhulu Stiv Voznyak uyathokoza ukunqoba emzini abaqambi umncintiswano, okuyinto kwenziwe yi-BBC. Wethula ukuba amajaji oyinkimbinkimbi wokubala, okuyinto bahlangana ngokwayo! Kakade phakathi neminyaka yakhe esikoleni, Steve yaba ilungu Sylvania. Emva kokuthola isitifiketi imfundo yesibili waya Berkeley ukuze iqhubeke nesifundo sayo, lapho e-University of California. Ngokushesha kwaba sobala ukuthi imali indodana yakhe abaqeqeshiwe abazali, okuyinto ayifuna ngabomvu entula, ngakho Stiv Voznyak waphoqeleka ukudlulisela Den-Asa University. Nokho, kusukela lokhu umfana esikoleni gone ngokushesha.
UStefanu wayengumfundi okhuthele unyaka wesibili ngenkathi enikezwa umsebenzi Hewlett-Packard Company. Ngaphandle ukucabanga wawisa futhi wathatha inkampani elikhula ngokushesha isikhala umklami yokubala. Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi ke, ngo-1975, anawo wonke onjiniyela ukuthi inkampani kwadingeka abantu mayelana ayisishiyagalombili ngesikhathi, kwakukhona computer eyodwa kuphela.
Ngo-1975, imakethe i-US livela computer yokuqala Altair-8800. UStefanu akakhiphanga ngaleso sikhathi ngoba lakhe $ 400, kodwa ibe okungenani-ke "umntwana kwenqubekela phambili," wayegunde ukuthi ube nesiqiniseko! Ngakho wahamba ngenye indlela - musa wena, usebenzisa i- microprocessor Motorola kanye amamojuli eziningana inkumbulo. ekudalweni Wozniak sika eminyakeni embalwa ngaphambi umphakathi kakade bahambise kudivayisi Altair-8800, futhi kwaba okusunguliwe ezimangalisayo.
Ukuhlola umsebenzi Wozniak, namesake wakhe futhi umngane ezinhle Stiv Dzhobs oye waphayona ukuthuthukiswa lomunye imodeli ikhompyutha - ukuze lizovela PC ababebuthene ngokugcwele, okuyinto unesithakazelo emkhakheni computer abathanda. Kuze kube yimanje, owasungula le PC kwadingeka ukwengeza ikhibhodi, qapha, futhi kancane yimemori. Wozniak wamukela isiphakamiso abakwethembi, kodwa nokho bavumelana. Abangane ithengiswe eziyigugu zabo (Wozniak - Hewlett-Packard wokubala yesayensi kanye Imisebenzi - Volkswagen van), ukuze bakwazi ukuthenga izakhi ezidingekayo ikusasa computer. Ukubuthana ibhodi ikhompyutha egalaji futhi ngokushesha uyoba inkundla yephrojekthi commercial yabo Apple I.
Ekuqaleni kuka-1976, izingane wathola oda zayo zokuqala amayunithi 25 ama-computer kusuka electronics nomthengisi wangakini, bese Wozniak wayeka umsebenzi Hewlett-Packard futhi wazinikela ngokuphelele ukuba umsebenzi wakhe. Ngo-1976, okungukuthi 1 Apreli, Stiv Voznyak futhi Stiv Dzhobs wadala, futhi ngo-1977 ngokomthetho inkampani yakhe, walibiza ngokuthi i-Apple Computer, behlonipha iqembu othandekayo abangane - Beatles, kuma-albhamu okuyinto bezilokhu logo ngesimo i apula.
Apple mina ikhompyutha Simple futhi icwecwe, adalwe ezimbili uStefanu ngo-1976, waziletha inzuzo yabo yokuqala. Amadivayisi kuwufanele 666 zamadola 66 amasenti sekudayiswe izingcezu angaphezu kuka-600. Futhi imodeli entsha Apple II, elula kakhudlwana futhi icwecwe, futhi konke kuphendukile kwaba inkampani encane igalaji ibe corporation. Isidingo Apple imishini kuye kwangithinta ngempela, ngokushesha okukhulu inkampani unqobile isheya elikhulu emakethe computer. Ngo-1980, Wozniak futhi Imisebenzi baba abayizinjinga.
Stiv Voznyak wasezala inguquko emhlabeni lwamakhompyutha. It kwakuxhomeke kanjani zibona abasebenzisi amakhompyutha amasha kuwo. Ngenhla design yangaphandle lamadivayisi ngasebenza Imisebenzi yokuthi wayengumuntu ongawafuni amaphutha, kodwa Ukusebenziseka - master Wozniak. Izinhlelo eziningi amakhompyutha Apple abhalwa kuye. Ukuze abanyathelisi, udaba zazo kwaba ngelinye umsebenzi wenkampani, Wozniak futhi nengoma emnandi isofthiwe udaliwe. Calvin ulimi lokwakha izinhlelo, computer game ngokuthi Breakout, futhi iqoqo virtual processor imiklamo shestnadtsatibitnogo EMNANDI-16 - futhi ukuthuthukisa Wozniak.
Naphezu kweqiniso lokuthi amagama amabili Steven ezahlukene (Steven noStephen), Ezwa efanayo. Elabizwa ngebizo abasebenzi Bangawuthola cha, ngakho ngokuvamile abizwa ngokuthi abaholi babo njengoba "Steve" futhi "lesibili, Steve." Stiv Voznyak (isithombe okuyinto akuvamile kubaneka futhi liza liphuthuma endaweni nakomagazini) kwadingeka izidlaliso eziningi izibizo. Wabizwa kanye «I WOZ», futhi «iWoz», futhi «Iseluleki ka WOZ». Umngane nalowo asebenzisana Imisebenzi bambiza nje "WOZ".
Life ngaphandle kwe-Apple
Ngo-1981, Wozniak ngesikhathi suka indiza yakhe e Santa Cruz kwakungu kuphahlazeka indiza. Ngenhlanhla, yonke into ihamba kahle futhi Steven ayitholanga ukulimala kabi. Okuwukuphela kwento wamhlupha ngemuva kwengozi - ukulahlekelwa amandla okukhumbula. Akazange nowodwa sigameko, noma sokuhlala kwakhe esibhedlela, noma imisebenzi elula nsuku zonke ukuthi waziphatha ngemva wakhishwa esibhedlela. Steve kwadingeka ukuqoqa izingcezu kolwazi kwabanye abantu. ngokushesha Memory ebuyela kuye, ingxenye enkulu ngenxa imidlalo nge-Apple II.
Ngemva kuphahlazeka indiza, uStefanu awabuyelanga inkampani, futhi wayechitha isikhathi sakhe ukwakha umndeni. Washada Kendi Klark, esasithanda ukubiza "Superwoman" igama lakhe, amagama afana Superman Clark Kent - eyaziwa e-US incwadi yamahlaya iqhawe.
Ngesikhathi esifanayo Wozniak wabuyela-University of California ukuqhubeka nezifundo zakhe. Ngo-1986, wathola iziqu ezifundweni yakhe (kwezobunjiniyela kagesi kanye nobuchwepheshe bama-computer).
Kwaphela iminyaka emibili elandelanayo (1982 futhi ngo-1983) Stiven Voznyak exhasiwe idwala uma kunemikhosi yesizwe kuphela «I-US Festival», wakhe ubuhanjelwe Ozzy Osbourne, Van Halen, Motley Crue, Judas Priest, U2, Scorpions nezinye izinganekwane idwala. Isici yale mikhosi babe embukisweni novelties ubuchwepheshe jikelele.
Ngo-1983, Stiven Voznyak wanquma ukubuyela Apple isikhundla unjiniyela ehola. Kodwa ngo-February 1987, uphuma inkampani futhi, kulokhu, phakade. Isizathu kwaba esidumazayo kakhulu, umngane futhi engumngane uSteve Imisebenzi.
Ngemva kokushiya Apple Wozniak eyasungulwa yizinkampani ezimbalwa ubuchwepheshe, phakathi okwakukhona kulo «CL-9" ukwenza ngaphandle ukukhiqizwa izilawuli kude, «Amasondo Of uZeyusi», bavula engenantambo GPS-technology. Ngo-2002, Steve bajoyine «Ripcord Networks Inc.» inkampani eBhodini Labaqondisi kanye «Ingozi Inc.».
Ngaphezu kwalokho, UStefanu waqale imfundiso asebenzayo nemisebenzi yokusiza umphakathi. Yena exhasiwe hlelo ubuchwepheshe Los Gatos - County lapho izingane ziyaya esikoleni uStefanu. Ngonyaka 2004 ngegalelo lakhe emkhakheni computer, wathola iziqu zobudokotela e-University of North Carolina.
Enye indalo, okwakunginika emhlabeni Stiv Voznyak - incwadi «iWoz», echaza izenzakalo zokuphila kwakhe. Kuwufanele ukufunda noma ubani nesithakazelo emlandweni futhi izici ekuthuthukiseni ubuchwepheshe bama-computer yesimanje.
Ukuphathwa ukusebenza, imfuno ukuphathwa kwebhizinisi
Isitayela Control Head: kobushiqela, yeningi, ube nesandla esivulekile, anarchist, esingalingani, isimo
Chief Operating Officer (Chief Operating Officer): incazelo umsebenzi
Richard Roxburgh: Biography, Filmography, empilweni yakho
Ubani wathola Australia?
Ingubo abathandwayo ngezandla zabo
Izici Jikelele sportbike Yamaha Yzf-R125
Inethiwekhi ongashiwongo: ukuxazulula inkinga
Phyto "iSiphepho" - neminye itiye. Izibuyekezo
Zonke izinzuzo nezingozi endzaweni lephephile lokungeniswa, kanye pan for lokungeniswa hob
Izinhlobo ezinkulu emisebenzini ukuqeqeshwa on the abafundi GEF. imihlahlandlela
Biography emfushane futhi izincwadi Giyoma Myusso
Locker - kuyini? Yiziphi ikhabethe?